I-Kirin 985 iya kuba yiprosesa yokuqala ukuba ne-5G ngokwendalo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IHuawei ngoku isebenza kwisizukulwana sayo esilandelayo Iiprosesa zokuphela okuphezulu. Kule meko, sinokulindela ukuba iKirin 985 ibe yiprosesa eza kuphehlelelwa luhlobo lwaseTshayina. Iinkcukacha zokuqala malunga nale processor sele zifikile, ke siyazi kancinci malunga nento esinokuyilindela kuyo. I-5G ithembisa ukuba yinto ebalulekileyo kuyo.
Okwangoku, iiprosesa eziphezulu zohlobo lweempawu zaseTshayina azinakho ukuhambelana kwe5G. Nangona kunokwenzeka, enkosi ekusebenziseni imodem ye5G ukuba uphawu lwaseTshayina luthi thaca. Kodwa kubonakala ngathi le Kirin 985 ayizukuyidinga le modem.
Kuba ulwazi olutsha lubonisa ukuba le Kirin 985 iya kuba yile Iprosesa yokuqala kwintengiso ine-5G edityanisiweyo. Ke ngekhe kube yimfuneko ukusebenzisa imodem, njengokuba kunjalo okwangoku kwaye sele sibonile kwezinye iifowuni zohlobo lwesiTshayina, njengeMate 20 X. Ke lutshintsho olukhulu.
Le processor kulindeleke ukuba isungule kwisiqingatha sesibini salo nyaka. Ngokuqinisekileyo i-Huawei Mate 30 iya kuba nale chip entsha ngokwendalo. Kule meko, uphawu luya kubuyela kulo ukubheja kwinkqubo yokuvelisa kwii-nanometer ezisixhenxe kunye neprosesa.
Le Kirin 985 iya kuba yeyona nto iphambili kuluhlu oluphezulu lweHuawei. Kunyaka ophelileyo sele bekwazile ukuba ngabokuqala ukusishiya nge-chip eyenziwe kwii-nanometer ezisi-7. Kubonakala ngathi kulo nyaka baya kuba ngabokuqala uku ube neprosesa eya kuba ne-5G edityanisiweyo ngokwendalo. Umzuzu obalulekileyo.
Ezi nyanga sinako lindela amarhe amaninzi kunye neendaba malunga neKirin 985, koku sinokuqiniseka. Ke ngoko, siya kuyithobela ingqalelo idatha eya kufika malunga neprosesa entsha yohlobo lwesiTshayina. Kuba ithembisa ukuba yinto ebalulekileyo kwakhona kwi-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei's Kirin 985 sele izakufika nge5G ngokwendalo